यसरी बन्छ चिनी (फोटोफिचर)- फोटोफिचर - कान्तिपुर समाचार
यसरी बन्छ चिनी (फोटोफिचर)
चैत्र ३१, २०७३ शब्द/तस्विर : माधव घिमिरे
विराटनगर — चियासँगै आउने अर्को चिजको नाम हो चिनी । चियाका पारखीमध्ये चिनी हालेर बनाइएको चिया नै बढी प्रचलित छ । के हो चिनी ? यो उखुबाट बनेको स–साना सेतो दानाको गुलियो खाद्य पदार्थ हो । उखु सख्कर, मिस्री र चिनी बनाइने कच्चापदार्थ हो । यसको रस निकालेर ती बस्तु बनाइन्छ । मोरङ, सुनसरीलगायत तराईका जिल्लामा प्रशस्त उखु खेती हुने गरेको छ ।
चिनी कसरी बन्छ ? खेतबारीमा किसानले गर्ने उत्पादनदेखि ढुवानी, प्रशोधन, गुणस्तर जाँच, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ अनि बजारीकरणसम्म आइपुग्दा यसले लामो प्रक्रिया पार गरेको हुन्छ । किसानले उत्पादन गरेको उखु चिनी कारखानासम्म ढुवानी हुन्छ । त्यसपछि उखुलाई पेलेर रस निकालिन्छ । त्यसलाई विभिन्न चरणमा प्रशोधन गरिन्छ । चिनी बन्ने भाग एकातिर अनि खेर जाने बस्तु अर्कातिर निकास हुन्छ ।
यसबीच गुणस्तर परीक्षणलगायतको प्राविधिक काम हुन्छ । अन्त्यमा हामीले चिया र अरु चिजमा प्रयोग गर्ने स्वरुपको चिनी बन्छ । त्यही चिनी बन्ने प्रकृयाबारे आज हामीले तस्विरहरुको श्रृंखला तयार पारेका छौं ।
प्रकाशित : चैत्र ३१, २०७३ १६:४७
बैशाख ३१ गते कुनैपनि हालतमा चुनाव हुन्छ : आयुक्त पौडेल
'याे चुनाव राजा ज्ञानेन्द्रले गराए जस्ताे हाेइन'
चैत्र ३१, २०७३ अगन्धर तिवारी
पर्वत — स्थानीय तहको निर्वाचन आउन ठीक एक महिना बाँकी रहेको बेला निर्वाचन आयुक्त इश्वरीप्रसाद पौडेलले निर्वाचनका विषयमा शंका नगर्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् । आयोगले निर्वाचनको ९० प्रतिशत तयारी सकेको भन्दै आयुक्त पौडेलले तराइमा सेना परिचालन, दुई चरणको निर्वाचन, निर्वाचन नहुने लगायतका आधारहिन कुराको पछि नलाग्न आग्रह गरे ।
स्थानीय तहको निर्वाचन आउन ठीक एक महिना बाँकी रहेको बेला निर्वाचन आयुक्त इश्वरीप्रसाद पौडेलले निर्वाचनका विषयमा शंका नगर्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।
आयोगले निर्वाचनको ९० प्रतिशत तयारी सकेको भन्दै आयुक्त पौडेलले तराइमा सेना परिचालन, दुई चरणको निर्वाचन, निर्वाचन नहुने लगायतका आधारहिन कुराको पछि नलाग्न आग्रह गरे ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पर्वतले आयोजना गरेको अन्तरकृयामा सञ्चारकर्मीहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘बैसाख ३१ गते कुनै जुठोसुत्केरो पर्दैन । ठुक्क हुनुस् । यो डिमाण्डबेस निर्वाचन हो ।’ दुई चरण र तराइमा सेना परिचालन गरेर निर्वाचन गर्ने मनस्थीतिमा आयोग नरहेको उनले बताए ।
‘संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिले अनुमति दिएपछि मात्रै सेनालाई प्रयोगमा ल्याउने हो,’ उनले भने, ‘सेनाले गस्ती, हवाइगस्ती गरेर मतदातालाई सुरक्षाको अनुभुति दिलाउन मात्रै सेनाको प्रयोग गर्न सकिने कुरा गरिएको हो । मतदानस्थलमा प्रहरी मात्रै हुन्छन् ।’
तराई क्षेत्रमा बढी सुरक्षा चाहिएमा हवाइ र स्थल गस्तीका लागि आवश्यक भए मात्रै सेनाको सहयोग लिन सकिने कुरा आयोगले गरेकोले यसलाई नबंग्याउन उनले आग्रह गरे ।
आयुक्त पौडेलले विगत कोट्याउँदै अहिलेको निर्वाचन जनताले मनदेखि नै चाहेको हुनाले कुनै पनि बाहनामा नरोकिने दाबी गरे । ‘हिजो राजा ज्ञानेन्द्रले गरेकोजस्तो यो चुनाव होइन । २० वर्षदेखि जनप्रनिनिधिविहिन भएको स्थानीय तहका जनताले चाहेको ‘डिमाण्डबेस’ चुनाव हो,’ उनले भने ।
आयोगका प्रवक्ता सुर्यप्रसाद शर्माले आयोगले हरेक दिनको कार्यतालिका बनाएर काम गरिरहेकोले सोहिअनुसार निर्वाचनको तयारीमा जुट्न सबैलाई आग्रह गरे ।